एप्पल वाचले बेलायतमा साइकल चालकको जीवन बचाउँछ | म म्याकबाट हुँ
एप्पल वाचले बेलायतमा साइकल चालकको जीवन बचाउँछ
यस्तो देखिन्छ कि एप्पल वाचले एक साइकल चालकको ज्यान बचायो जो बगिरहेको नदीको प्रवाहले बगाएको थियो। पूर्व उनले एप्पल वाच लगाएका थिए जसको साथ उनले उद्धार टोलीलाई सम्पर्क गर्न सके रूखमा समातिए पछि।
यस अवस्थामा विकी नदी, जुन विकिपेडियाले भनेको छ: isडोरसेट को काउन्टी को माध्यम बाट यूके अंग्रेजी चैनल ढलानमा छोटो समुद्री तटThe सवार छक्क पर्यो जो फ्ल्याश बाढी पछि फसेको थियो। तपाईंको घडीको साथ आपतकालीन सेवाहरूमा कललाई धन्यवाद सुरक्षित र आवाज उद्धार गर्न भयो.
उद्धार स्टेशनको कमाण्डर सीन बेलीले स्थानीय रेडियोमा र यस घटनाको बारेमा व्याख्या गरे बीबीसी न्यूजले यसको वेबसाइटमा यसको विवरण दिन्छ, ती एप्पल घडीको साथ गरिएको कललाई धन्यवाद जुन उनीहरू स्थान र समस्याको बारेमा कुरा गरिरहेका थिए जुन यस व्यक्तिले गरेका थिए। साइकल चालकलाई तलतिर बगाइएको थियो, बेलीले वर्णन गरे, रूखमा चढ्न र आकस्मिक सेवाहरूमा उसको घडीको साथ कल गर्न प्रबन्ध मिलायो.
हेयरफोर्डको रोथरवासबाट बग्ने नदी वे जुन नदी र इ England्ल्यान्ड र वेल्स बीचको सिमाना नजिकै अवस्थित छ र बाढीको कारण गाह्रो हुँदै गइरहेको थियो र भाग्यले सबै कथा राम्रोसँग अन्त्य भयो। जे भए पनि, सिरी वा यस्तै किसिमको घडीको साथ आपतकालिन कल गर्ने विकल्प पाउँदा यस साइकल चालकलाई हाम्रो जीवन बचाउन सक्छ। दुई दिन अघि हामीले म्याकबाटै व्याख्या गर्यौं एक साथ अर्को खुशीको अन्त्य हो टेक्सास मा एक महिला अपहरण।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल उत्पादनहरू » Apple Watch » एप्पल वाचले बेलायतमा साइकल चालकको जीवन बचाउँछ
एयरट्यागहरूले वर्षको अन्त्य सम्म दिनको उज्यालो देख्न सक्दछन्। सिरिल कम्पनीले प्रि-सेलमा केहि सामान राख्दछ
यदि त्यहाँ एप्पल कार छैन भने, तिनीहरू यी प्याटेन्टहरू के चाहन्छन्?